မူကြိုကလေးငယ်များအား ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများနှင့် မြို့တွင်းလေ့လာရေး ပို့ဆောင်ပေး ~ Myaylatt Daily.
မူကြိုကလေးငယ်များအား ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများနှင့် မြို့တွင်းလေ့လာရေး ပို့ဆောင်ပေး
2:58 PM သတင်း No comments
မကွေး ဖေဖော်ဝါရီ ၆
မြန်မာကလေးများနေ့ အကြိုလှုပ်ရှားအဖြစ် လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထား ရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မကွေးမူလတန်းကြိုကျောင်းမှ ကလေးငယ်များပျော်ရွှင်မှုရရှိစေရန်၊ ပြင်ပဗဟုသုတများရရှိစေရန်၊စုပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန်၊ရည်ရွယ်၍ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့် ဆရာ/ဆရာမများက ဦးဆောင်ကာ ဖေဖော်ဝါရီ (၂ )ရက်နေ့တွင် ကျောင်းအတွင်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး(၃)ရက်နေ့တွင် မကွေးမြသလွန်စေတီမြတ်သို့ ဘုရားဖူးပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ဖေဖော်ဝါရီ (၄)ရက်နေ့တွင် ကလေးငယ်များနှင့်မိဘများပါတက်ရောက်၍ မိဘအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး (၅)ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံသို့ လေ့လာရေးခရီး ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့်(၆)ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့ ထိန်ထိန်သာ ကစားကွင်းနှင့် ကောင်းမွန်ကစားကွင်းများသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ကလေးငယ်များအား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အမျိုးသားသတင်းဆုပေးပွဲကျင်းပ၊ သတင်းသူရဲကောင်းဆု သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကြိုင် ရရှိ
အမျိုးသားသတင်းဆုပေးပွဲကျင်းပ၊ သတင်းသူရဲကောင်းဆု သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးအုန်းကြိုင် ရရှိ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ရန်ကုန် မေ ...
ကိုယ်ရံတောင်ကျေးရွာတွင်မီးဘေး ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးနှင...
တောင်တွင်းကြီးမှာ ညပိုင်း လုယက်မှုများရှိနေ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ...
တောင်တွင်းကြီး၌ ကြက်ခြံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွား !!
မြို့မဈေး မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ် ရေးကွင်းဆင်း စစ်ဆေး !!
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး SME(မကွေးရုံး)မှ ယနေ့ထိ လုပ်ငန်...
မြို့သစ်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြ...
အမှုထမ်းများ အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်းဖွင့်
စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရေး အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြောပွဲ...
စစ္စနို့မှ ကန်တုတ်ထိ အမြန်ကားလမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်ပြီ...
ရေနံချောင်းမြို့နယ်၌ ကျောင်းသား/သူများ အေးချမ်းစွာ...
လောက်ကိုင် ရှင်းတမ်း - ၄
မကွေး အ.ထက (၁)မှ ဆရာကြီးဦးနေဝင်းသည် ၁၇.၂.၂၀၁၅ က မ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခုံနံပါတ် ၅၆ ဖြင့် B.A.ဘွဲ့ရပ...
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သတင်းစာဆရာအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသက်...
သရက်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး သရက်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး...
ကျေးလက်လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တင် ရေးဆင့်ပွားသင်တ...
အခြေခံကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် (တတိယ)အကြိမ်မြောက် အာစရ...
(ဂျင်းရှီ)JIANSHEဆိုင်ကယ်Luck Drawဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်
ပခုက္ကူခရိုင်ဆေးရုံတွင် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ...
ငဖဲမြို့နယ် တောင်ပေါ်ဒေသ လိုင် ကျေးရွာတွင် (၆၇)နှစ...
မင်းဘူးမြို့နယ်၊ အိုင်းမကျေးရွာအနီး မန်းချောင်းစပ်...
လောက်ကိုင်ဒေသတွင် နိုင်ငံတော်တာဝန်များအား သက်စွန့်...
Telenor ရဲ့ net monday ကို မကွေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်း...
မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် လိုဂို ပန်းချီဆရာဟန် မှ နတ်မော...
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မကွေ...
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မုန်းမြင့်-အင်းဒေါင်းကျေးရွာ၌ လျှ...
ပွင့်ဖြူမြို့တွင်း သန့်စင်လမ်း ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာခင်း...
မင်းဘူးတွင် မြန်မာ့မီးရထားမှသိန်း(၄၀၀၀)ကျော် မြေယာ...
နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဝက်သက်နှင့်ဂျိုက်သိုးရောဂါ ကာကွယ်...
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကွင်း ဆင်းစစ်ဆေး
ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် ကပိုင်ကျေးရွာတွင် ကျောင်း ဆောင်သစ်...
ပျံကျဈေးသည်များအား စတုတ္ထအကြိမ် ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်...
သာလွန်အင်အားနဲ့အငိုက်ဖမ်းတိုက်ခံရလို့ကြံ့ ကြံ ...
လောက်ကိုင်ဒေသတွင် ကျဆုံးသွားသော ... စစ်သည်မိသားစုမ...
လောက်ကိုင်မှ ပြန်အဆင်း ကြက်ခြေနီယာဉ်တန်း အပစ်ခံရ
လောက်ကိုင် ရှင်းတမ်း - ၃ ( မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီ...
လောက်ကိုင် ရှင်းတမ်း - ၂ ( မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီ...
လောက်ကိုင် ရှင်းတမ်း - ၁ ( မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီ...
ဆိပ်ဖြူမြို့်နယ် မြင်က၀ကျေးရွာအုပ်စု နွေစပါးစိုက်ေ...
မကွေးမြို့ပေါ်တွင် လောင်းကစားပြုလုပ်သူအား အမှုဖွင့်အ...
ရေနံချောင်းမြို့၊ မြို့မဈေးကြီး ဆိုင်ခန်း ၃၁၂ ခန်...
ရေနံချောင်းဈေး မီးလောင်ပြင်မှ ဆိုင်ခန်းပေါင်း သု...
မီးဘေး ကာကွယ်ရေး သတိပေး နှိုးဆော်
မြေလတ်မီဒီယာ ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ်(၃) ထွက်ပါပြီ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် စမ်အိုင်ရွာ ...
၁၄/၂/၁၅နေ့၊ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသက်လွင်က မကွေးတိုင...
မြေလတ်မီဒီယာ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသက်လွင်၏ေ...
ဗိုလ်ချုပ် နှစ်တစ်ရာပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်း အမှတ် မြန...
၁၄-၂-၂၀၁၅ နေ့ ၊မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် နှင...
မြို့သစ်မြို့နယ် သီးပင် ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင် သုံးဘီ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်(၁၀၀)ပြည့် မွေးနေ့ ပွဲတော်တ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်(၁၀၀)ပြည့်ပွဲတော်မှ မုဒိတာ ...
အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ သံဂဟေဆက် မွန်...
သိပ္ပံနည်းကျ ဘောင်စနစ်ဖြင့် ပုလဲသွယ် စပ်မျိုးစပါး ...
(၆၇)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ငဖဲမြို့နယ် လ်...
(၆၈)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်အနား စလင်းမြို့...
(၆၈)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသော...
မြေလတ်မီဒီယာ ဂျာနယ် အတွဲ(၁) အမှတ် (၂) ဒေါင်းလုပ်ဆွ...